﻿ कोरोना संक्रमणलाई बेवास्ता गर्नु जिन्दगीकै ठूलो पश्चताप !
कोरोना संक्रमणलाई बेवास्ता गर्नु जिन्दगीकै ठूलो पश्चताप !
– राम कुमार धमला
मङ्गलबार ३०, बैशाख २०७७
नेपालमा कोरोना केस प्रतिदिन तिब्र रुपमा बढिरहेको छ । उता, विना पूर्वतयारी लकडाउन खोलिदै छ ।
अस्पतालहरुलाई पूर्णरूपमा आवश्यक सुरक्षा कवच राष्ट्रिय रुपमा पुर्‍याउन गार्हो छ । तर पनि ओपिडि लगायतको सेवा निरन्तरता दिन भनिएको छ । सार्वजानिक सेवाका कार्यलय खुला गरिदै छ । सबै कर्मचारीहरुलाई काममा बोलाईदै छ । मानिसको भिडभाड सुरु भई सक्यो ।
अब चुनौतिहरु के हो भने एक स्वास्थ्यकर्मी, नर्स वा चिकित्सक संक्रमित भए भने त्यो संक्रमण ओपिडिमा त छाड र म छाड गरेर ज्यानै फालेर आउनेहरु सयौँलाई सर्यो भने उक्त अवस्था भयावह हुन सक्छ कि सक्दैन ? खोई यो विषयमा मनन् गरेको ? सेवा प्रदायक एक कर्मचारी संक्रमित भए भने सवै सेवाग्राही प्रभावित हुन्छन कि हुन्न ? खोई कम कर्मचारी एक्सपोजरको उपायलाई अवलम्वन गरेको ?
२०७६ माघ मा पहिलो पटक कोभिड १९ को केस नेपालमा देखियो । अहिलेसम्म नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र मेडिकल कलेजहरुले गम्भीर लक्षण रहित कोभिड बिरामिहरुको विषयमा खोई रिसर्च गरेको ?
केही हद्सम्म सुखद पक्ष मान्नु पर्छ कि आजसम्म कोभिड १९ केसले मृत्यु वर्णन गरेको छैन । तर कोरोनाले संसारलाई मारिरहदा नेपालीलाई बाँकी राख्छ भन्नू कतिको विज्ञान सम्मत हुन्छ ? तथ्यहरुलाई हेर्दा केही देशहरुमा संक्रमितको संख्या ३००–४०० जना हुँदा पनि मानिस मरेको देखिन्दैन तर सो भन्दा माथि नाघे पछिको सेकेन्ड स्पाईक र म्युटेड सार्स सि ओ भि २ ले भकाभक ढलायो ।
नेपाल सरकारले कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र सतर्कताका लागि कामै नगरेको भने होईन तर जति गर्नुपर्ने हो । त्यो चै नगरेकै हो । जस्तो सहज वातावरण थियो । त्यो बेला काम नभएकै हो । धन्न नेपालमा संघियता लागू भएछ र तीन तहको सरकार बनेछ । जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सके जति रोकथाम र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । हुनत नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कहिले प्राथमिकतामा नराख्नु र रुलिङ पार्टिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पहिलो रोजाईको मन्त्रालयमा नपार्नु पनि यी सबका कारकहरु हुन् ।
यो लेखी रहदा एउटा सन्दर्भ जोडौ । एक जना दुबईमा काम गरि चैत्रमा नेपाल आएका व्यक्ति केहि दिन अघि हाम्रो अस्पतालमा जाच गर्न आए । र भन्दै थिए सर म एयरपोर्टमा काम गर्थे । त्यहाँ त भकाभक मानिस ज्वरोले ढल्थे तर भिडियो खिच्न दिईन्दैन थियो । हो हामिले पनि सामाजिक सन्जाल र न्युज पोर्टलहरुमा हेरेकै छौ । पढेको नै छौ ।
तर पनि हामी कता कता कोरोनालाई राज्यको तहमा वा नागरिकको तहबाट समेत बेवास्ता त गरिरहेका छैनौं । एक पटक मनन् गरौ । यदि नेपालमा महामारी जति ढिला र थोरै संख्यामा हुन्छ त्यति थप तयारि र समाधानका वातावरण बन्न सक्छ ।
एक पटक सम्झिउ न परिवारमा पनि एक जना बिरामी हुँदा जति केयर हुन्छ सबै जना बिरामी भए कसले कसको स्याहारसुसार गर्ने ? हो त्यसैले संक्रमित नहुन सतर्कता अपनाउनुको कुनै विकल्प छैन । तर म मात्रले संयमित भएर हुन्न तपाईं हामी सबै सतर्क हुन जरुरि छ । अन्तयमा यो बेला बिना सुरक्षा र बिना सतर्कता हिडडुल गर्नु भनेको आफैमा भाईरस कहलाउनु हो र आफ्नो परिवारलाई आफैले संक्रमित बनाउनु हो ।
त्यसैले कोरोना संक्रमणलाई बेवास्ता गर्नु जिन्दगी कै अभुतपुर्व पश्चताप हुनेछ । समयले नेटो काटे पछिको पश्चताप केवल न्यारिमारि पछुतो सिवाय हुनेछ ।